स्क्रिनसट कसरी लिने | पोस्टपोस्ट
लौरा Torres प्लेसहोल्डर छवि | 21/05/2022 15:19 | आलोचकहरू, जिज्ञासा, प्रविधि
स्क्रिनसट कसरी लिने?निस्सन्देह, यो नेटमा प्रयोगकर्ताहरूले आफूलाई सबैभन्दा धेरै सोध्ने प्रश्नहरू मध्ये एक हो। र यो छ कि प्रविधिको विकास संग यो विभिन्न तरिकामा पनि गर्न सकिन्छ। यो तपाईले स्क्रिनसट लिन चाहनु भएको उपकरणमा पनि निर्भर गर्दछ।
यदि तपाइँ थप जान्न चाहानुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई सजिलै कसरी बनाउने भनेर बताउनेछौं।
यो त्यस्तो चीज हो जुन एक पटक तपाईले यो कसरी गर्ने भनेर जान्नुभयो, यो तपाईंको लागि धेरै सजिलो हुनेछ। यो एक उपकरण हो जुन दैनिक आधारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, र यसले हामीलाई अर्को व्यक्तिलाई खाता नम्बर, ठेगाना वा फोटो पठाउन सजिलो बनाउँदछ, उदाहरणका लागि। त्यसैले हामी यहाँ जान्छौं।
तपाईले प्रयोग गर्नुहुने अपरेटिङ सिस्टमको आधारमा, यो प्रकार्य फरक हुन सक्छ। तसर्थ, हामी यसलाई सबैभन्दा लगातार सञ्चालन प्रणालीहरूको लागि संकेत गर्न जाँदैछौं।
1 पीसीबाट स्क्रिनसट कसरी लिने
1.1 विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम को लागी
1.2 स्क्रिनसट के हो?
1.3 म कसरी मेरो कम्प्युटरमा स्क्रिनसट लिन सक्छु?
1.3.1 यदि तपाइँ Windows 8 र 10 प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
1.3.2 यदि तपाईको कम्प्युटर विन्डोज ८ वा १० पुरानो संस्करण हो भने:
1.3.3 Windows 10 मा स्निपिङ उपकरण प्रयोग गर्दै
2 एन्ड्रोइडबाट स्क्रिनसट कसरी लिने
2.0.1 स्क्रोलिङ स्क्रिनसट लिनुहोस्
2.0.2 स्क्रिनसटहरू कसरी फेला पार्ने, साझेदारी गर्ने र सम्पादन गर्ने
3 iOS बाट कसरी स्क्रिनसट लिने
3.1 कसरी iPhone 13 र अनुहार आईडी संग अन्य मोडेल मा स्क्रिनसट लिन
3.2 टच आईडीको साथ आईफोन मोडेलहरूमा स्क्रिनसट कसरी लिने
3.3 तपाईको आईफोनमा स्क्रिनसट कसरी पत्ता लगाउने
पीसीबाट स्क्रिनसट कसरी लिने
विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम को लागी
Windows ले तपाईको कम्प्युटर वा ल्यापटपको स्क्रिनसट लिन सजिलो बनाउँछ। स्क्रिनमा छवि सिर्जना गर्न तलका यी चरणहरू पालना गर्नुहोस् जुन तपाईंले बचत गर्न वा अरूसँग साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ।
स्क्रिनसट के हो?
स्क्रिनसट, वा को रूपमा पनि चिनिन्छ स्क्रिन प्रिन्ट वा स्क्रिनसट, तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनबाट खिच्नु भएको स्न्यापसट छवि हो। यो बहुमुखी हुन सक्छ, तपाइँ यसलाई रसिदहरू बनाउन, तपाइँको कम्प्युटरबाट जानकारी खिच्न र तपाइँलाई छविहरूको आकार परिवर्तन गर्न अनुमति दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोजमा तपाईंको स्क्रिन खिच्ने धेरै तरिकाहरू छन्, तपाईंले प्रयोग गर्ने माध्यम तपाईंले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने र कुनमा सबैभन्दा सहज महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ।
म कसरी मेरो कम्प्युटरमा स्क्रिनसट लिन सक्छु?
स्क्रिनसट लिनु अघि, तपाइँसँग Windows को कुन संस्करण छ भनेर निर्धारण गर्न आवश्यक छ। नयाँ संस्करणहरू जस्तै Windows 8 र 10 ले तपाईंलाई किबोर्ड आदेश मार्फत स्क्रिनसटहरू लिन अनुमति दिन्छ, जबकि पुरानो संस्करणहरूले तपाईंलाई छुट्टै मेनु पहुँच गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, तपाईले चाहानु भएको समान क्याप्चर प्राप्त गर्न तेस्रो-पक्ष उपकरणहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ Windows 8 र 10 प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
तपाईंले खिच्न चाहनुभएको स्क्रिन खोल्नुहोस्, यो एउटा कार्यक्रम होस्, ब्राउजर विन्डो होस्, वा तपाईंले तस्विर लिन चाहनु भएको कुनै पनि कुरा होस्। यदि तपाईंले छवि अपलोड गर्नुभएको छैन भने, तपाईंको कम्प्युटरले यसलाई प्रशोधन गर्न सक्षम हुने छैन।
चाबी फेला पार्नुहोस् "प्रिन्ट स्क्रिन" तपाईको किबोर्डमा। यो सामान्यतया मा पाइन्छ माथिल्लो दाहिने कुना, बटन माथि "SysReq", र अक्सर को रूप मा संक्षिप्त छ "ImpPt" o "Imp Pnt".
एकै साथ थिच्नुहोस्e प्राथमिक कुञ्जीहरू "जित"e"imp pnt"। यसले सम्पूर्ण हालको स्क्रिनको स्क्रिनसट लिनेछ। स्क्रिन फ्लिकर वा मधुरो हुन सक्छ सफल क्याप्चर संकेत गर्न, यद्यपि सबै कम्प्युटरहरूले गर्दैनन्। साथै तपाईं कुञ्जीहरू थिच्न सक्नुहुन्छ Alte"imp pnt", जसले छवि क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्नेछ।
जानुहोस् यो पीसी> चित्रहरू> स्क्रिनसट, र तपाईले चाहानु भएको क्याप्चर खोज्नुहोस्।
यदि तपाईको कम्प्युटर विन्डोज ८ वा १० पुरानो संस्करण हो भने:
यदि छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। यहाँ हामीले तपाईलाई पालना गर्नुपर्ने चरणहरू बताउँछौं। Windows को नयाँ संस्करणहरू जस्तै, तपाईंले जारी राख्नु अघि तपाईंले फोटो लिन चाहनुभएको पृष्ठ लोड गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट, निम्न गर्नुहोस्:
कि थिच्नुहोस् "imp pt", जुन सामान्यतया कुञ्जीको छेउमा पाइन्छ "समारोह" मा किबोर्डको माथिल्लो दायाँ कुनामा। यदि तपाईको ल्यापटपमा चाबी छ भने "Fn", तपाईंले गर्नुपर्ने हुन सक्छ प्रेस साँचो "Fn" र कुञ्जी "imp pnt" एकै समयमा।
अनुप्रयोग खोल्नुहोस् रंग मेनूबाट मुख्य पृष्ठ। बायाँ तर्फ टास्कबारमा रहेको सर्च इन्जिनमा "पेन्ट" टाइप गर्ने सबैभन्दा छिटो तरिका हो।
भित्र स्क्रिनसट टाँस्नुहोस् रंगटाँस्ने विकल्पमा, वा थिचेर Ctrl + V simultáneamente।
छवि पेन्ट र मा देखा पर्नेछ तपाईले यसलाई तपाईलाई उपयुक्त हुने ढाँचामा बचत गर्न सक्नुहुन्छ (JPEG वा PNG)। PNG सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो किनभने यसले सानो फाइल साइजमा छवि गुणस्तर कायम राख्छ। छवि बचत गर्न Ctrl+S थिच्नुहोस्; यसले एउटा सञ्झ्याल खोल्नेछ जहाँ तपाइँ यसलाई बचत गर्न स्थान छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
Windows 10 मा स्निपिङ उपकरण प्रयोग गर्दै
अक्टोबर 2018 मा, विन्डोजले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई स्क्रिनसट लिनको लागि अर्को तरिका थप्यो। यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
अनुप्रयोग खोल्नुहोस् स्निपिङ उपकरण स्टार्ट मेनुबाट आफ्नो उपकरणमा।
बटन चयन गर्नुहोस् न्वेवो शीर्ष बायाँ कुनामा।
एक पटक तपाईको स्क्रिनमा विन्डो देखा पर्दैन, तपाईले चाहानु भएको स्क्रिनसटको प्रकार रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईं freeform, फुल स्क्रिन, वा आयताकार छविहरू बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को तरिका आफ्नो स्क्रिन कब्जा गर्न को लागी छ नयाँको छेउमा तलको तीरमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले पनि केही सेकेन्डले ट्रिमिङ ढिलाइ गर्छ।
तपाईंका तस्बिरहरू स्निपिङ उपकरण कार्यक्रममा भण्डारण गरिनेछ, जहाँ तपाइँ कलम वा पेन्सिल उपकरणको साथ एनोटेट गर्न वा तिनीहरूलाई चित्रण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले गर्नुभएका परिवर्तनहरूसँग यो क्लिपबोर्डमा पनि पहुँच गर्न सकिन्छ।
एन्ड्रोइडबाट स्क्रिनसट कसरी लिने
तपाईंले आफ्नो फोनको स्क्रिनको फोटो (स्क्रिनसट) लिन वा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ।या त। एकपटक तपाईंले भिडियो खिच्न वा रेकर्डिङ पूरा गरेपछि पनि, तपाईंले तिनीहरूलाई हेर्न, सम्पादन गर्न र साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, यी मध्ये केही चरणहरू एन्ड्रोइड ११ र त्यसपछिका संस्करणहरूमा मात्र उपलब्ध छन्। यहाँ हामी तपाईंलाई एक छोड्दछौं लिङ्क तपाईंसँग एन्ड्रोइडको कुन संस्करण छ भनी जाँच गर्न।
यी चरणहरू तपाईंले स्क्रिनसट लिनको लागि पालना गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्:
तपाईंले खिच्न चाहनुभएको स्क्रिन खोल्नुहोस्।
तपाईसँग भएको फोनमा निर्भर गर्दै, निम्न चरणहरू मध्ये एउटा छान्नुहोस्:
एकै समयमा पावर र भोल्युम डाउन बटनहरू थिच्नुहोस्।
यदि यसले काम गर्दैन भने, केही सेकेन्डको लागि पावर बटन होल्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि गर्नुहोस् स्क्रिनसट क्लिक गर्नुहोस्।
यदि यी मध्ये कुनै पनि विकल्पले काम गरेन भने, मद्दतको लागि आफ्नो फोन निर्माताको समर्थन साइट जाँच गर्नुहोस्।
तल्लो बायाँ कुनामा, तपाईंले स्क्रिनसटको पूर्वावलोकन देख्नुहुनेछ। केही फोनहरूमा, तपाईंले स्क्रिनको शीर्षमा स्क्रिनसट आइकन देख्नुहुनेछ।
स्क्रोलिङ स्क्रिनसट लिनुहोस्
यी चरणहरू अधिकांश यन्त्रहरूमा मात्र गर्न सकिन्छ Android 12 स्क्रोलिङ स्क्रिनहरूको साथ।
तल, क्लिक गर्नुहोस् थप कब्जा.
स्क्रिनसटहरू कसरी फेला पार्ने, साझेदारी गर्ने र सम्पादन गर्ने
यदि तपाइँसँग छैन भने तपाइँलाई भन्नुहोस् aplicación तस्बिरहरू, तपाईंसँग Android को पुरानो संस्करण हुन सक्छ। आफ्नो स्मार्टफोनमा ग्यालरी एप खोल्नुहोस् र एल्बम दृश्य ट्याप गर्नुहोस्, त्यसपछि स्क्रिनसट फोल्डर।
अब तपाईको फोनमा अनुप्रयोग खोल्नुहोस् तस्बिरहरू.
लाइब्रेरी क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि स्क्रिनसट.
स्क्रिनसट साझेदारी गर्न: साझेदारी क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले यसलाई साझेदारी गर्न चाहानु भएको माध्यम छनौट गर्नुहोस् (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, इमेल ...)।
स्क्रिनसट सम्पादन गर्न: सम्पादन क्लिक गर्नुहोस्।
iOS बाट कसरी स्क्रिनसट लिने
कसरी iPhone 13 र अनुहार आईडी संग अन्य मोडेल मा स्क्रिनसट लिन
साइड बटन र भोल्युम अप बटन एकै समयमा थिच्नुहोस्।
दुबै बटनहरू छिटो छोड्नुहोस्।
स्क्रिनसट लिए पछि, एउटा थम्बनेल तल्लो बायाँ कुनामा देखा पर्नेछ एक क्षणको लागि स्क्रिनबाट बाहिर।
यसलाई खोल्नको लागि थम्बनेलमा ट्याप गर्नुहोस् वा यसलाई बेवास्ता गर्न बायाँ स्वाइप गर्नुहोस्.
टच आईडीको साथ आईफोन मोडेलहरूमा स्क्रिनसट कसरी लिने
शीर्ष बटन र गृह बटन एकै समयमा थिच्नुहोस्।
दुबै बटनहरू छिटो छोड्नुहोस्.
थम्बनेल खोल्नको लागि ट्याप गर्नुहोस्, वा यसलाई बेवास्ता गर्न बायाँ स्वाइप गर्नुहोस्।
तपाईको आईफोनमा स्क्रिनसट कसरी पत्ता लगाउने
फोटोहरू खोल्नुहोस् र एल्बमहरू > मिडिया प्रकारहरू > क्याप्चरहरूमा जानुहोस्।
छोटकरीमा, स्क्रिनसट कसरी गर्ने भनेर जान्नु जानकारी बचत गर्न वा पछि प्रयोगको लागि छविहरू भण्डारण गर्ने एक आदर्श तरिका हुन सक्छ। यो एक धेरै उपयोगी उपकरण हो र यो चाँडै गरिन्छ।
मलाई आशा छ कि यो जानकारी उपयोगी भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: पोस्टपोस्ट » प्रविधि » स्क्रिनसट कसरी लिने